लघुवित्तलाई गैरबैंकिङबाट स्रोत खोज्न बाटो खुला — Arthatantra.com
Arthatantra.com > पत्रपत्रिका > लघुवित्तलाई गैरबैंकिङबाट स्रोत खोज्न बाटो खुला
काठमाडौं । कर्जा लगानी गर्न वैकल्पिक स्रोतको माग गरिरहेका लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले गैरबैंकिङ क्षेत्रबाट स्रोत खोजी गर्न बाटो खुलाइ दिएको छ ।
२०७७ पौष १२ गते ०८:२८ मा प्रकाशित
नेरुडे लघुवित्तमा तपाईको सेयर छ ? पाउँदै हुनुहुन्छ २० प्रतिशत बोनस सेयर
सुनको मूल्यमा फेरि बृद्धि, के भइरहेकोछ सुन बजारमा ?
शेयर बजारमा लगातार सुधार : ७.१० अंकले बढ्यो, एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको कारोबार
बैंकलाई तत्काल ब्रोकर लाइसेन्स दिन बैंकर्स संघको माग